बेथानकाे चाैकिमा धावा तिम्ले बाेल्दा……. – YesKathmandu.com
नेत्र माेक्तान ‘सचेत’ (नेकपाका युवा नेता)
लडदामा लड्दै ढलेको छोरालाई सम्झेर,
बेदनाको आँसु पुछ्नुहोस आमा कठोर बनेर।
बेथानको चौकिमा धावा उसले बोल्दा
नेपालै रोयो नि उ त्याहाँ ढ्ल्दा।।
जनयुद्ध सुरु भएको १० महिना १९ दिनमा रामेछाप बेथान गाबिसको पानीघाट स्थित प्रहरी चौकिमाथि माओवादी छापामार दस्ताको एक टुकडीले शसस्त्र धावा बोल्यौ । आजै जस्तो लाग्छ तर समय कति छिटो दौडिसकेछ । २०५३ सालको पौष २० गते बिहान झुल्केघामसँगै हेलिकप्टरले लखनपुरको तिमालडाँडालाई फन्को मार्दै बेथान तिर हुईकिदै गरेको अझै पनि मनसपटलमा ताजै छ ।
देशव्यापी जनयुद्धको धक्काले आतंकित तत्कालिन सत्ता रामेछापको वेथानस्थित शसस्त्र प्रहरी चौकिमाथि हमलाबाट निकै आतंकित बन्यो । शाहि प्रहरीको सबै हतियार खोसिएको त्यो घटनाले राज्यसत्ताको सुरक्षामाथि गम्भीर धक्का लाग्यौ । माओवादी जनयुद्धलाई भने यस सफलताले अरु फौजी सफलताको ढोका खोल्न र नयाँ फौजी रणनीतिका निम्ति कोशेढुंगा भएको थियो।
यस ऐतिहासिक सफलताले दुश्मनको पंक्तिमा आफ्नो सत्ता असफलताको ठूलो संकेत गर्यौ। ऐतिहासिक त्यो मोर्चाले जनयुद्धको अबधिमा निकै ठूलो चर्चा परिचर्चा बटुल्यौ। जनविरोधि सत्तामाथि जनताको जीत सुनिश्चित छ प्रमाणित भयो । त्यसकारण पनि बेथान मोर्चा एतिहासिक मोर्चा रह्यौ। क्रान्तिकारीहरुका लागि यो आज र भोलीका लागिसमेत उर्जाको स्रोत हो ।
यस मोर्चामा माओवादी छापामार दस्ताका त्यस मोर्चाका कमान्डर कमरेड तिर्थ गौतम, कमरेड दिलमाया बोम्जन र फत्तबहादुर स्माली शहीद हुनुभयो । तीन जना होनहार योद्धाहरुले जीवन बलिदान दिनुभयो । देशके मुहार फेर्न यसरी आफ्नो जीवनको बलिदानका लागि पछि नपर्ने सहिद कमरेडहरु आज नेपालको यो परिवर्तनको मुल हकदार हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामी नसम्झिरहन सक्दैनौं र उहाँहरुको त्यो अमूल्य रगतको बलिदानले आज नेपाल विश्वसामु नयाँ राजनीतिक परिवर्तनले चिनिएकाे छ ।
वेथान मोर्चामा कमान्डर र सहयोद्धाहरु गुमाएर पनि मोर्चालाई उच्च तबरले सफल बनाउने अरु ज्युँदा शहीद योद्धाहरुको पहल कदमी पनि प्रेरणादायी रहेको छ। उहाँहरुप्रती पनि आज पार्टीले उच्च सम्मान व्यक्त गर्न सक्नुपर्दछ ।
बेथान मोर्चाको सफलतासँगै माओवादीका विरुद्ध राज्यसत्ता बौलाहा कुकुर झै देश व्यापी दमनमा उत्रियो। जति दमनले जनताका बिद्रोहलाई रोक्न खोजेपनी अन्तत जनताको संगठित बिद्रोहले एकपछी अर्को राजनीतिक र फौजी सफलताका आधारहरु तय गर्दै हजारौं जनताको गोलबन्द सहित जनयुद्ध रणनीतिक रक्षा ,रणनीतिक सन्तुलन हुँदै रणनीतिक प्रत्याक्रमनको योजना हुदै बृहत शान्ती सम्झौताबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामासम्म अइपुगेको छ । र परिवर्तनका मुलुक आज नयाँ युगतर्फ प्रवेश गरेको छ।
संबिधानको घोषणापछि नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा देशलाई स्थिरता र समृद्धि दिनका लागि परिवर्तनका मुल संबाहक शक्ति दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता सहित नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । यसरी देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई मार्गदर्शन गर्न अहम भुमिका बेथान मोर्चा र ऐतिहासिक जनयुद्धको रहेको छ । यस अर्थमा बेथान मोर्चा नेपालको समाजवाद उन्मुख संविधानको जननी हो। संविधानमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अधिकारहरुको प्रत्येक अंशमा ती शहीदहरुको रगतको छिट्टाहरु छन् । जस्ले युग युगसम्मको परिवर्तनलाई मार्गदर्शन गरिरहने छ ।
त्यसैले आउँदै गरेको ऐतिहासीक बेथान वीरताको सन्दर्भमा त्यस मोर्चाका शहिदहरुलाई उच्च सम्मानकासाथ हार्दिक श्रद्धाञ्जली । सहभागी सम्पुर्ण योद्धा तथा नेताहरुमा हार्दिक सम्मान सहित अभिनन्दन ।
बेथान वीरता दिवस आउँदै गर्दा त्यस मोर्चाकी सहिद कमरेड दिलामायाको सम्झना मेरो मानस्पटलमा आइरहन्छ । जनयुद्धको तीब्रतासँगै २०५३ को मंसिर महिनाको सुरुतिर मैले कमरेड दिलमाया बोम्जनसँग मेरो स्कुलमा भेटभएको थियो। अखिल (क्रान्तिकारी)को ८औं जिल्ला सम्मेलनका लागि कमरेड रमेश ढुंगेलसंग मेरो बिद्यालयमा भेटहुँदा कमरेड दिलमाया पार्टीमा पूर्णकालिन भैसक्नु भएको रहेछ । यसपछी भने उहाँलाई श्री कालिका माबिको प्राङ्गणमा ८ औं जिल्ला सम्मेलनकै घोषणा सभामा मञ्चमा गित गाउँदै गरेको मात्र देख्न पाए। उक्त जिल्ला सम्मेलनपछि पौषको १९ गते भएको त्यस एतिहासिक बेथान मोर्चामा उहाँ कमरेड दिलमाया बोम्जनको शाहदत भएको रहेछ । उक्त खबरले निकै मर्माहित बनाएको थियो ।
रामेछापको साबिक लखनपुर गाबिसको वाड ४, कामागाँउमा जन्मिएको दिलमाया बोम्जनले रामेछापका जनयुद्धका गुरु कमरेड बाबुराम लामा, आफ्नै मामा पाल्देन लामा, आफ्नै दाजु प्रेमसागर लामा, नेता रमेश ढुंगेल, डन्डु तिवारीहरुबाट राजनीतिक प्रेरणा लिए । दिलमाया एक अनुशासित, गम्भीर स्वभावकी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । गहुँ गोरो, अग्लि र पातलो शरीर कि दिलमाया बोम्जनसंग त्यहि बिद्यालयको प्रशिक्षण कार्यक्रमको भेट नै अन्तिम भेट भयो ।
दिलमाया कलिलो एला जोबन,
दुष्ट से साईजिम परवा दा राङ,
एला कलिलो का ठाम्सी
सुनापती शैलुङ ल्हाहा बाम्जी।
एउटा कलिलो उमेरमा आफुलाई देश र जनताको मुक्तिका खातिर जीवन बलिदान गर्न तयार हुनु आफैमा एक साहसिक कदम हो। यहि कदम मार्फत युगौंको सामन्ती दासता तोड्नका लागि कमरेड दिलमाया बोम्जनले आफुलाई माओबादको आलोकमा जनयुद्धमा जीवन होम्न तयार हुनुभयो र दुश्मनको चौकी धावा बोल्दै पार्टी र क्रान्तिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा सहिद हुनु भयो। आज कमरेड दिलमायाको यहि विचारलाई अनुसरण गर्दै उहाँका समकक्षी कमरेडहरु उहाँको बाटोमा अघि बडिरहेका छ्न ।
रामेछापबाट जनयुद्धको दौरान थुप्रै महिला योद्धाहरु क्रान्तिमा होम्मिए र रामेछाप गोठागाँउकी अनुपा,दोरम्बा कि सरस्वती योन्जन,दोरम्बाकै बिना मगर,लखनपुर पुँडिटारकी रबिना बिकले विभिन्न मोर्चामा शहादत प्राप्त गर्नु भयो। कमरेड दिलमायाले बेथानको मोर्चामा साहदत प्राप्त गरि एक प्रेरणायि भुमिका खेल्नु भयो जनयुद्धमा महिला सहभागीताका निम्ति । आमा टीका देवी लामा र बुबा खड्ग बहादुर लाम को कोखमा जन्मिएका दिलमाया बोम्जनले गाउँकै श्री बुद्देस्वर प्राबि तिमालडाँडा बाट पठन पाठान सुरु गर्नुभएको थियो। पछि दिलमायाले श्री कालिका माबी रिष्ठेबाट एसएलसि पास गर्नु भयो । आज उहाँ दिलमायाका सम्पूर्ण परिवार पार्टीमा संगठित हुनुहुन्छ
जनयुद्धका कयौं कार्यक्रमहरुमा मैले बिध्यालयबाट दिलमायाकी आमालाई पार्टी नेताहरुसंग भेटघाट र आमसभाहरुमा लगेकी छु । त्यस बेला आमा भन्नुहुन्थ्यो, ‘छोरिको रगत बग्यौ, पार्टीले राम्रो गरोस् । अब त्यही हेर्ने रहर छ ।’
आमाको काखबाट चुँडिएको त्यो कलिलो मुटुले देशको मुहार फेरेको छ । जनतालाई बर्षौ बर्षसम्म शोषण गरेर टिकिरहेको सामन्ती सत्ताको महल ढलेको छ । जनताबाट आफ्नो शासन सत्ताको फैसला आफै गर्ने दिनको सुरुवात भएको छ । शहिदका सपनाहरू नेपालको राजनीतिक सतामा प्रतिबिम्बित भएको छ । त्यसकारण दिलमाया कि आमाको खुशी लुट्नेहरुका दिन गएको छ ।
आमा तपाईंलाई नभेटेको नि करिब २ बर्ष पूरा हुँदै छ । समय र परिस्थितिले भेट नभए नि हामी तपाईंसंगै छौं । सहिद दिलमायाका सपनाहरूमा छौ । क्रान्तिको नयाँ र मौलिक बाटोमा तपाईं हामिसबैको क्रान्ति नायकको कासनमा लामबद्ध छौं। शहिदका रगतहरुले रोपिएको यो परिवर्तनको बोट अब कहिल्यै मर्ने छैन् ।
पौष १९ गतेलाई युग परिवर्तनको निम्ति एक उज्यालो दिनको रुपमा स्मरण गरौं। परिवर्तनका लागि युगौ युग अघि बडिरहने संकल्प हामी सबै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले गरौं । सहिदपरिवारप्रती हार्दिक सम्बेदना प्रकट गरौं।
इतिहासमा तिमी कहिल्यै मेटिने छैनाै
युगौ युग बाँचिरहने छाै
त्यो शैलुङ अनि त्यो चौरिखोला
त्यो तिम्रो रगत बगेको माटोले
कहिल्यै मर्ने छैनन्
बेथान वीरताकाे इतिहास काेर्ने
हाम्रा प्यारा तिफदीहरु !!